Ahoana ny fomba hampihinana ny alikako raha ny fahitako azy? | Tontolo alika
Monica Sanchez | | Fahano alika sy alika kely
Ny alikanao tsy te hihinana hoy aho? Na dia marina aza fa biby be dia be izy io, dia tena manan-tsaina ihany koa. Tsy fahita firy fa, rehefa avy nanandrana zavatra tianao kokoa (toy ny kapoaky ny sakafo mando) ianao dia tsy mahatsiaro te hihinana ny croquette intsony. Ny antony, mazava ho azy, dia tsy tsy ampy satria matsiro kokoa noho ny maina ny sakafo am-bifotsy, fa ny toekarena indraindray tsy mahazaka ny fandaniana amin'ny fanomezana azy io sakafo isan'andro.
Avy eo, Inona no hatao amin'ireo tranga ireo? Amin'izao fotoana izao dia mamporisika anao aho hamaky hatrany mba hahitana ny fomba hampihinana ny alikako raha ny fahitako azy. Avy eo, andramo ny fitsapana anay ary mety ho azonao ilay sakaizanao tongotra efatra maniry ny sakafony mahazatra.
1 Aza omena sakafo kely azy
2 Manampia menaka kely amin'ny sakafo
3 Afangaro amin'ny sakafo lena ny fahana
4 Aza manova marika be loatra
Aza omena sakafo kely azy
Fantatro: sarotra be ny manalavitra azy. Ny fijeriny mahafinaritra dia milaza izany rehetra izany. Fantatsika fa tsy tokony hatao izany, saingy… tsara tarehy izy, ary tena tia azy isika… Eny. Saingy mila matanjaka koa isika. Ho an'ity, Azontsika atao ny mieritreritra fa raha omentsika azy izay rehetra tadiaviny dia afaka mandray kilao fanampiny izy amin'ny farany, izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe. antonony na maharitra (diabeta, fiakaran'ny tosidra, ankoatry ny hafa).
Manampia menaka kely amin'ny sakafo
Angamba ny manjo ny volonao dia tsy hitany ny tsiron'ny sakafo. Hanampy anao, azonao atao ny manidina diloilo kely eo amboniny ary manaitra azy amin'ny sotro. Ny safidy matsiro kokoa dia ny fanamboarana ron-kena akoho tsy misy tanana ary ampio amin'ny sakafonao. Mety tsy ho afaka hanohitra ianao amin'izay.
Afangaro amin'ny sakafo lena ny fahana
Ny fomba mandaitra indrindra hampiasana ny alika hihinana sakafo indray dia ny fampifangaroana kely kokoa azy io amin'ny sakafo nohaniny mandraka ankehitriny. Ity ny drafitra:
Herinandro voalohany: afangaro amin'ny 70% ny sakafonao vonjimaika amin'ny sakafo 30%.
Herinandro faharoa: afangaro amin'ny sakafo mitovy amin'ny sakafo ny sakafo vonjimaika.
Herinandro fahatelo: afangaro amin'ny sakafo 30% ny sakafo tsy maharitra 70%.
Herinandro fahefatra: 100% heveriko.
Aza manova marika be loatra
Lazaiko aminao avy amin'ny zavatra niainanao: alika manova marika famahanana indraindray dia lasa sybarite BEsaika, saika toy ny saka. Ny tsara indrindra dia ny manome azy sakafo matanjaka (tsy misy voamadinika) hatramin'ny voalohany fa tsy manova azy.
Manantena aho fa mahasoa anao io 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny fomba hampihinana ny alikako raha ny fahitako azy?
Ampiasao na tsia ny vozon'akanjo fiofanana alika